Pfungwa dzekushandura iyo Ikea Rast mupfeki | Bezzia
Pfungwa dzekushandura iyo Ikea Rast mupfeki
Maria vazquez | | Zviite iwe pachako
Apo a ikea cabinet inowira mumawoko ekugadzira, inogona kushandurwa uye kunyangwe kutora rimwe basa rakasiyana neiro iro rakagadzirirwa. Idzi shanduko uye shanduko dzakatambudzwa nefenicha yesweden hofori inozivikanwa seIkea Hacks.
La RAST chifuva chemadhirowa nemadhirowa matatu ari, pasina mubvunzo, imwe yeiyo "yakapazwa" fenicha kubva kuIkea. Uye ndezvekuti chidimbu chehuni chisina kurapwa chinotibvumidza kutamba nemhando dzakasiyana dzependi uye varnishi uye inotikoka isu kuti tibatanidze moldings, washi-tepi motifs uye mamwe marongero.
1 Zvimiro zveRAST chest yemadhirowa
2 Kurumidza mazano ekushandura Rast mupfeki
3 Rast Hacks
3.1 Sechigadziko chehusiku
3.2 Seye mbiri vhezheni fenicha
3.3 Se tafura yebasa
3.4 Semidziyo yevana
Zvimiro zveRAST chest yemadhirowa
Rast idhirowa-dhirowa bhokisi re isina kurapwa pine. Iyo yakasimba huni fenicha ine yakanaka uye isingagone kupera kwese iyo Ikea inotikoka kuti tibate nemafuta, wakisi, varnish kana pendi. Kuti? Nekuti sekutaura kwaIkea "ichagara kwenguva yakareba uye ichave nyore kuitisa."
Haisi fenicha hombe; Yakaungana, inoyera 62x30x70 cm. Iyo haina huremu hukuru futi, inorema zvishoma kupfuura gumi neshanu K. Nechikonzero ichocho uye kuita kuti imba yako ive nzvimbo yakachengeteka yemhuri yese, inosanganisira chengetedzo Hardware kugadzirisa fanicha kumadziro.
Kurumidza mazano ekushandura Rast mupfeki
Ine mutengo unodhura, zviri nyore kuungana uye kushanduka-shanduka… Rast chest of drawers is a classic in the Ikea catalog. Fenicha iyo nyore kugadzirisa uye anga ari iye protagonist wemazhinji hacks nemaoko ekugadzira. Kunyangwe isu tisingafanire kuvhiringidzika; haufanire kunge uri murume anobatsira kuti uve neIkea yakasarudzika.
Pane mazano akapusa, seanotevera, aunogona kushandisa:
Wedzera a pasi furemu nemavhiri kuitira kuti igone kufambiswa nyore.
Wedzera makumbo kuwana kukwirira uye / kana kufambisa pasi kuchenesa.
Penda madhirowa ine geometric motifs
Rongedza madhirowa nemicheka.
Shongedza madhirowa ne geometric kuumbwa, hura, mhete, kana washi tepi.
Bvisa dhirowa uye utsive nesherufu.
Chinja mapfundo nedzimwe dzemhando dzakasiyana uye mavara.
Rishandure rikaita chipfuva chemadhirowa nekujoinha 2 chipfuva chemadhirowa uchishandisa chimiro chepasi.
Wedzera kametiresi diki pamusoro kusvika kumuita tafura yekuchinja.
Kupinda mumba memuvakidzani uye kutsvaga mupfekeri mumwe chete kana girazi rinoshongedza imba yako hazvina musoro patinotaura nezve fanicha yeIkea. Kutenga fanicha kuIkea, zvisinei, hazvifanire kuti tirege zvidimbu zvakasarudzika. Tinogona kuvashandura uye nekuchinja zvachose chitarisiko chavo nejasi rimwe chete repende uye nezvimwe zvitsva.
Iyo RAST chifuva chemadhirowa inogona kuve iyo iyo fanicha ne kumira mune chero nzvimbo. Unogona kuishandisa setafura yemubhedha, senhumbi huru muhoro kana kushongedza kona yako yaunofarira. Uye kana iwe ukashandisa maviri, mikana inowedzera! Iwe unogona kugadzira fanicha yeterevhizheni, madhesiki uye makamuri ekupfeka, pakati pevamwe.
Imwe yemashandisirwo akajairika kune weIkea RAST mupfeki ndeyekushanda setafura yemubhedha. Jasi repende uye shanduko yemabatiro kazhinji inokwana kuchinjanisa nekamuri yedu yekurara. Nekudaro, kune vamwe vanoenda mberi uye vanowedzera makumbo kuti vaigadzirise pakukwirira kwemubhedha kana kuita vasina rimwe remadhirowa ekunyaradza kukuru.
Seye mbiri vhezheni fenicha
Kana uine chidimbu chidiki chakasiiwa sechidimbu chimwe chete, edza kujoina vaviri vanopfeka. Akazviita sei? Unogona kuabatanidza kana gadzira fenicha yakaoma kunzwisisa kusanganisa chimiro chine makumbo anotsigira vaviri vanopfeka uye iwo aunogona kushandisa kuisa zvimwe zvishongedzo.
Makumbo anozobvumira huni dziri pasi kuti dzibude nemhepo uye panguva imwechete dzinokutendera kuti uichenese zvakanyanya. Rangarira kuti huremu hwemupfekeri huchawanda nepaviri uye kuti kuifambisa hakuzove nyore pasina rubatsiro. Iwe unogona chete kuzviita kana iwe ukabatanidza mavhiri ekugadzira.
Se tafura yebasa
Vapfeki veRAST vanova mubatsiri mukuru kana zvasvika mukugadzira nzvimbo dzebasa. Nemapfekero maviri tinogona gadzira desktop zvirinyore, kubatanidza nzvimbo inobatanidza zvese. Uye nenzira imwechete yatinoshandisa ivo kugadzira tafura, tinogona kuvashandisa kugadzira tafura yebasa mugaraji, mairi kuronga maturusi.
El mutengo uye mukurumari yeaya maIkea vanopfeka anovaita iwo akakodzera ekushongedza nzvimbo dzevana. Ivo vachiri vacheche, vaviri vevapfeki vanogona kukwana kurongedza mbatya dzavo uye kushumira, panguva imwechete, setafura inoshanduka. Zvaringana kuisa kamatiresi diki pamusoro.
Kushongedza mupfeki weRast wevateereri vevana kunogona zvakare kunakidza. Unogona kushandisa pastel shades kana enda kune neon ruzivo kuti uwedzere ruvara kumupfeki. Imwe pfungwa yakakura kupenda mhuka kana geometric motifs pairi. Ipa kufungidzira!
Iri zano rakanaka here kugadzirisa munhu akapfeka Rast kushongedza imba yako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Zviite iwe pachako » Pfungwa dzekushandura iyo Ikea Rast mupfeki
9 mabhegi engamera ezuva rako nhasi
Kunwa mvura nezvikafu, zvakanaka kana zvakaipa?